tufaaxa tufaaxa - SmartMe
Tag archives: tufaax
Dom » Galitaanada ku sumaysan "tufaax"
Apple HomeKit, nololeedka, dib u eegista
AirTag - ugu dambeyntiina waa meel hagaagsan
hawada, tufaaxa, Apple AirTag, goobta, Hal, Ranre
AirTag waa aalad ay Apple muddo dheer "tufaysay". Waxaan sugeynay shir kasta labadii sano ee la soo dhaafay si ay ugu dambeyntii u soo baxaan, laakiin ugu dambeyntii waa halkaan. Marka waxaan isla markiiba amar ku bixiyay qaybo ka mid ah 4 oo aan sugo ...
In ka badan boqolkiiba 60 Milkiilayaasha iPhone waxay rabaan inay iibsadaan AirTag
hawada, tufaaxa, iphone
SellCell waxay dhowaan daraasad ku samaysay koox ka kooban saddex kun oo isticmaale iphone ah oo ku saabsan alaabada cusub ee Apple. Waan ognahay fikradaha dadka ee ku saabsan wax soo saarka Apple. Ilaa boqolkiiba 61. Milkiilayaasha iphone ayaa qorsheynaya inay iibsadaan AirTag dhawaan ....
Shaashadda guriga ee kiniinka Huawei MatePad 2 oo leh Harmony OS wuxuu u egyahay midka Apple
tufaaxa, wada noolaanshaha os, huawei, huawei matepad, Huawei matepad 2, matepad 2 pro
Shirkadda Huawei waxay muddo dheer isku dayeysay inay Apple kula qabsato suuqa korantada. Ku dhowaad wax soo saar kasta oo shirkadda leh oo tufaax ku leh astaanta ayaa leh dhiggeeda suuqa oo ah qaabka Huaweia. Waa isku mid markan markii ...
Apple wuxuu ku shaqeynayaa qalabkiisa ciyaarta?
tufaaxa, gry, console, ciyaarta ciyaarta
Ciyaaraha kombiyuutarka lagu ciyaarayo ayaa si aad ah caan u noqday. Ma aha oo kaliya sababta oo ah tirada sii kordheysa ee qalabka ciyaaraha, laakiin sidoo kale sababtoo ah dahaadhka guriga. Apple waxay umuuqataa inay rabto inay isticmaasho hada ...
Madaxweyne Tile ayaa Apple ku eedeeyay tartan aan cadaalad aheyn
tufaaxa, tartan, fargeetada
Apple waxay dhowaan daahfurtay aaladda loo yaqaan 'AirTag locator', oo ku tartanta alaabooyinka Tile-ga oo aad isugu eg. Madaxweynaha shirkadda ay xafiiltamaan ee CJ Prober ayaa dhowaan qirtay in fikirkiisa, tartanka la leh astaanta Mareykanka ...
Apple ayaa ku dhawaaqday isbeddelo muhiim ah iPhone 13
tufaaxa, iphone, iphone 13
Isbeddelo muhiim ah ayaa inagu sugaya casriga cusub ee Apple, ie iPhone 13. Waxaa jiri doona gundhig yar oo loogu talagalay kamaradda TrueDepth iyo isbeddel weyn ayaa lagu qarinayaa dhabarka taleefanka casriga ah, maxaa yeelay jasiiradda kamaradda dib ayaa loo naqshadeyn doonaa ...
Midabka guduudan ee iPhone 12 wuxuu ku helay lambarro taxane ah qaab cusub
tufaaxa, iphone, iphone 12
Qaabka nambarka taxanaha ah ee Apple waa inuu isbeddelaa dhawaan. Isbeddelada ayaa si tartiib tartiib ah loo hirgelinayaa, sida aan ku arki karno iPhone 12 oo ah midab buluug ah, kaas oo la soo bandhigay intii lagu jiray soo bandhigida Guga. IPhone casaan leh ...
Apple waxay shaqaalaysiisaa khabiir sirdoon macmal ah
ai, tufaaxa, sirdoon macmal ah
Saynisyahan Samy Bengio, oo ilaa hadda wax ka qabta horumarinta farsamada sirdoonka macmalka ah ee Google, ayaa go’aansaday inuu u wareego Apple. Bengio wuxuu ka shaqeynayay Google muddo ka badan 14 sano. Waxaan ka amba baxay 14 sano kadib Bengio oo ka tagay shirkadda Mountain View, ...
Sideen ugu rogaa astaanta Apple badhanka iPhoneka ee dheeri ah?
Ma isweydiineysaa sida loogu rogo astaanta Apple badhan dheeri ah oo ku saabsan iPhone-kaaga? Waa wax aad u fudud! Haddii aad isticmaaleysid taleefannadan casriga ah oo aad ku rakibtay barnaamijka IOS, markaa waxaan kuu haynaa war wanaagsan. Xaqiiqdii waad awoodi kartaa bilaash ...
Taxanaha Apple Watch 8 wuxuu cabirayaa heerka aalkolada dhiiga?
tufaaxa, watch apple, saacad caqli badan, smartwatch
Hawlaha caafimaadku waxay noqonayaan xubno aad muhiim ugu ah dhammaan saacadaha casriga ah iyo kooxaha. Waxay umuuqataa jiilalkii ugu dambeeyay ee Apple Watch inay ku qalabaysan doonaan xoogaa dareemayaal kacaan ah. Sida ay noqotay, Apple waa mid ka mid ah macaamiisha muhiimka ah ...